Maxaa ka dhigay music classic si dhiirigalin leh? Laga soo bilaabo Einstein in Shakespeare, qaar ka mid ah maankoodu ugu waaweynaa ee taariikhda waxaa taabtay music classic. Waa nooc ka mid ah music in uu awood u leeyahay in hoos aad dejiyaan oo aad ku riday niyadda fikirka qoto dheer. Music Classic laga yaabaa in aysan haysan caan ah in uu lahaa qarni ka hor, laakiin jiritaankeeda waa qaab ciyaareed soo jiidasho leh oo dhiirigalin aad. Maqaalkani waxa uu soo ururiyay ayaa ugu sareeya 10 fanaaniin classical ee waqtiga oo dhan, kuwaas oo in kastoo ay dhinteen muddo dheer ka hor, ay u waxyoonay dhex music ayaa weli dareemay in ay taariikhda.
Wolfgang A. Mozart waxa uu ku dhashay on 27 January 1756 ee Salzburg, taas oo hadda Austria oo waxaa loo arkaa mid ka mid ah composers ugu fiican classical ee waqtiga oo dhan. Opinion An ka hanad ee sayniska Albert Einstein "Mozart waa laxamiistaha ugu weyn ee oo dhan". Waxa uu ku koray uu music tayo da oo dhaylo ah oo da'da 5 uu addoonsada keyboard iyo rabaab iyo Kooxaha bulshada marti qaaday Europe oo dhan. Waxa uu ka kooban in ka badan 600 oo shuqullada ku sifayn music classical. Qaar ka mid ah shaqada Mozart ugu caansan ayaa waxaa ka mid ah:
Sonata Piano ee A
Symphony lahayn. 40
Ludwig Van Beethoven ahaa laxamiistaha ah German iyo biyaaniiste ku dhashay 1770, oo waxaa lagu amaanay sida tirada ugu fiican ee kala guurka ee u dhexeeya xilliyada caadiga iyo Romantic. Macallinkiisa music kowaad wuxuu ahaa aabbihiis iyo sida Mozart uu addoonsada farshaxanka Music da 'ah oo aad u tabar daranyahay. Isaga oo ay walxuhu ugu caansan waxaa ka mid ah 9 symphonies, 32 biyaano sonatas, 5 concertos u piano iyo 16 quartets xarig. Qaar ka mid ah walxuhu uu ugu caansan waxaa ka mid ah:
Symphony lahayn. 9
Sonata Piano lahayn. 14.
Johann Sebastian Bach ku dhashay 1685, waxa uu ahaa Jarmal organist, laxamiistaha iyo violist. Waxa uu ka yimid qoys oo muusikiiste ah iskala dib ab dhowr ah oo isugu darey uu waxaa loo tixgeliyaa mid ah shuqullada ugu qotada dheer ee waajihid ah. Waxa uu ku qoray in ka badan 1000 darey oo uu shaqo ka mid ah seddexda ciyaaryahan sonatas, sonatas Solo, iyo afar qol oo orchestral. Shuqullo Best loo yaqaano Dufcaddii ka mid ah:
CLAVIER oo habeysan hagaajiyey ayaa
St. Mathew hamiday.
Fredrick Chopin waxa uu ku dhashay on March 1, 1810 iyo sida Mozart Chopin ilmo hibada iyo noqday mid ka mid ah composers ugu da'da yar. Waxa uu ahaa biyaaniiste iyo laxamiistaha ah xilligii Romantic. Waxa uu caan ah oo la been abuurtay ee ballade ku ool ah iyo dhowr tabo cusub muusikada. Si aad u taariikhda ka badan 230 shuqullada Chopin badbaadaan oo shuqulkiisii ​​oo dhan oo ku lug leh biyaano oo wax yar uun ka baxsan music ah piano Solo. Shaqadiisii ​​ugu caansan waxaa ka mid ah:
Barcarolle ee F-Sharp oo waaweyn.
Piano no.2 Sonata
Antonio Vivaldi jiray Talyaani laxamiistaha, violinist, macalin iyo wadaad. Wuxuu ku dhashay barakiciyay in 1678, waxa uu aqoonsan yahay mid ka mid ah composers weyn Baroque iyo saameynta uu ku faafay Yurub oo dhan. Vivaldi qoray in ka badan 500 concertos ah oo ku saabsan 350 waa xadhig Solo iyo 230 waxaa loogu talagalay rabaab. Waxa uu ka kooban yahay ugu weyn oo ugu caansan waa taxane ah oo concertos rabaab loo yaqaan stagioni Le Quattro. Walxuhu kale by Vivaldi ka mid ah:
Llyitch 6. Peter Tchaikovsky
Piotr llyitch Tchaikovsky ku dhashay 1840, wuxuu ahaa laxamiistaha Ruushka oo shaqada saftay music masrixiyada ugu caansan ee waajihid ka classical. Waxa uu arkaa in ay tahay mid ka mid ah laxamiistaha ugu fiican iyo saameynta badan ee qarnigii 20-aad. Inkastoo uu guulo ku caan music naftiisa ahaa wata dhibaatooyinka laakiin weli waxaa dhacsan yahay cibaaro ah ee uu shaqada. Shaqadiisii ​​ka mid symphonies, concertos, opera Oo qowladda music. Shaqadiisii ​​ugu caansan waxaa ka mid ah:
Swan u gudubno,
NO.6 eel eh
George Frideric Handel ku dhashay on 23 February, 1685, waxay ahayd laxamiistaha British Baroque qiimeeyaa mid ka mid ah sayidkooda ugu weyn ee operas, oratorios, heesta iyo concertos xubin. Ka dib markii rabitaanka aabbihiis, wuxuu bilaabay sharciga waxbarasho ee 1702 iyo 15 sano gudahood, Handel uu sameeyey saddex guuto opera ganacsi qeybinayay dadkii ku abtirsan Ingiriisi la opera Talyaani oo u furay qaar ka mid ah caan ah sida 'hanad riwaayado amarka hore'. Isaga oo ay walxuhu ugu caansan waxaa ka mid ah:
8. Yuusuf Haydn
Joseph Haydn waxa uu ku dhashay on 31 March, 1732 ee Austria iyo waxaa loo arkaa mid ka mid ah hogaanka qiimeeyo composers classical ay sabab u tahay uu muusikada ee muddada classical. Waxa uu ahaa laxamiistaha weyn iyo qalabka sida Seddexda piano ee horumarinta qolkii music. Uu kaalin weyn in qaab music isaga epithets ku kasbaday "oo aabbo u ah eel eh" iyo "aabbe u ahaa afartii xarig ah". Qaar ka mid ah walxuhu uu ugu waaweyn waxaa ka mid ah:
Symphony lahayn 45
Toddobada hadalladii ugu dambeeyay ee Masiixa.
Giuseppe Verdi waa laxamiistaha Talyaani ah halyeey caan ku ah operas uu sii caan ah oo ilaa maantadan la joogo. Wuxuu ku dhashay 1813, wuxuuna horumariyo tayo music da 'yar oo markaas bilaabay barashada walxuhu muusikada. Waxa uu ka dalbaday oggolaanshaha ee Milan Conservatory laakiin la diiday madaama uu da '. Waxa uu hami ma ha laga yaabaa inuu isaga tago oo danbe, wuxuu bilaabay inuu waxbarasho ka yar laxamiistaha caan ah Vincenzo Lavigna ka Milan. Markaa ka dib waxa uu ka kooban isaga helay warkiisii ​​sida sayidkii operas saddex operas-La traviata, Falsaff iyo Aida. Walxuhu kale by Verdi ka mid ah:
Igor Stravinsky waxaa loo arkaa mid ka mid ah composers ugu saameynta badan ee qarnigii 20-aad. Waxa loo magacaabay by Magazine Star ee ka mid ah 100 qof ee ugu sareeya saameynta badan ee qarnigii. Waxa uu ku dhashay on 17 June 1882, waxay ahayd laxamiistaha ah, biyaaniiste iyo kaari yaqaan caalamka uu kala duwanaanta stylistic. Inkastoo uu raynrayn music, waalidka uu doonayay inuu sharciga ka barato. Oo iyana waxay isagii ku qoran ee Jaamacadda Saint Petersburg ee 1901, laakiin uu markii dambe hoos u dhacay si ay u baacsadaan music xirfadiisa. Waxa uu ka kooban saddex ballets abuuray oo la aqoonsan yahay sida "mid ka mid ah hal dhab ah epochal music ee" walxuhu kale by Igor Stravinsky ka mid ah:
Xaflad ee gu'ga
The horumarka balankiinno
> Resource > Music > Top 10 Artists Qadiimiga ah.